पाठ्यपुस्तक किन्दा यसरी ठगिदैछ | PaniPhoto
पाठ्यपुस्तक किन्दा यसरी ठगिदैछ	दिपध्वनी / April 19, 2012 /3Comments सरकारले विद्यालयबाटै पाठ्यपुस्तक बेच्न नपाउँने बनायो । मुल्यमा स्टिकर टासेर किताब बेचेर मज्जाले कमिसन खानेहरुलाई निकै अफ्ठ्यारो पर्न गयो । तर चोर बुद्धि न हो, एक एक तिरबाट दाउ छोपिहाल्छन् । आफ्नै स्कुलबाट किताब बेच्न नपाउँने भएपछि स्कुलहरुले गजबको आइडिया फुराए । उनीहरुले अभिभावकलाई फलानो पुस्तक पसलमा हाम्रो स्कुलमा पढाइ हुने किताब छ, त्यही गएर किन्नु होला, डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्दै धमाधम कमिसन पाउँने पुस्तक पसलमा ग्राहक पठाइदिए । त्यहीबाट सुरु भएको ठगी र कमिसनको खेल पुस्तक पसलमा झन् चरम बन्छ । एउटा नमुना हेर्नुहोस्
यो तस्विरमा याद गर्नु भयो कि भएन, यसमा कुन कुन किताब किनिएको हो भन्ने केही खुलाएको छैन । हरेक किताबको अलग अलग दाम हुन्छ, यसैले रसिदमा सबै खुलाउँनु पर्ने हो तर कुनै पनि किताबको दाम खुलाइएको छैन । बरु कतिवटा किताब किनिएको हो सिधै मुल्य लेखिएको छ ।
१० प्रतिशत छुट दिइएको छ जसले गर्दा अभिभावकलाई ठिकै पसलमा स्कुलले पुर्र्याएछ भन्ने लाग्छ । तर भारतमा छापिएका यस्ता किताबहरुमा सामान्यतया कम्तिमा १५ प्रतिशत छुट पाइन्छ बजारमा । अझ १० प्रतिशत त घटाएको देखिन्छ तर हिसाबमा ४१५ बाट ४४ रुपैयाँ ५० पैसा घटाउँदा ४०० बनाइएको छ । यो त सोझो ठगी हैन र ?
गर्न चाहने हो भने धेरै कुरा गर्न सकिन्छ । तर सबैभन्दा पहिले तपाई सचेत र निडर हुन सक्नु पर्छ । पहिले किन सोही पसलबाट मात्र किताब किन्ने भनेर स्कुलमा प्रश्न गर्नुहोस् । बजार भाउ बुझ्नुहोस् । मुल्य वास्तविक हो कि हैन जाँच गर्नुहोस् । स्टिकर टाँसेको वा विनाकारण भाउ फरक पार्नुको कारण सोध्नुहोस् । यसरी मात्र तपाई यस्ता ठगीबाट जोगिन सक्नु हुन्छ । तपाईसँग पाठ्यपुस्तक किन्दा ठगीएका वा ठगिनबाट बचेका कुनै अनुभव छन् कि ! तल कमेन्टमा लेख्नुहोस् है ।
Tags: price hiking of text book, text book of nepali students, पाठ्यपुस्तक किन्दा यसरी ठगिदैछ / Posted in: समाचार/विश्लेषण
उमेश खत्री says: April 20, 2012 at 5:09 pm / Reply
हैन, नेपालमा भएको चै के हो ? जो पनि फिलिममा पुलिसले गरे जस्तो गर्छ . लगभग ८० प्रतिशत किताबहरु बिक्री भइसक्यो रे . अब यस्ता कुरा उठाएर के फाइदा कारवाही पनि हुने होइन .
Sangeeta Pradhan says: April 20, 2012 at 9:15 pm / Reply
Government should made penalty to them. They are criminals.
Ratna Sundar says: April 21, 2012 at 10:14 am / Reply
कोनी के गरिसक्यो दैलो देख्यो भने जस्तै भो. पहिला नै कुरा उठेको भए निकै राम्रो हुन्थ्यो नि.